विचार – Sagarmatha Online News Portal
जनहितको बाटो राजनिति राज्य सञ्चालनको मुल नीति मानिने राजनीति समाजिक विभेद उन्मुलन गर्ने र समानताको सेतु हो । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संबैधानिक व्यवस्थाको एक अंग पनि हो । साधारण तय राज्य शक्तिका स्रोत माथि न्याययिक पहुँच राखी हुने खाने र हुदाँ खानेको दुरी कम गर्नु यश प्रणालीको मुख्य काम हो ।आज संसारका अति विकसित देशहरू पनि वर्गीय असमानता र अवसर माथिको न्ययायिक वितरणका लागि राजनितीक शक्तिमाथि नै...
सन्च खालिङ । नेपाललाई संसारकै दोश्रो जलश्रोतमा धनी अनि एसियाको पहिलो नै मानिछ । श्रोतलाई नै आधार मान्ने हो भने ८३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमता राख्छ जुन हामी नेपालीले भरपुर प्रयोग गरेर पनि बेच्दा मात्र आधा भन्दा बढी एसिया झिलीमिलि हुन्छ । तर यहाँ एसिया झिलिमिली हुने कुरा छोडौ १८ घन्टासम्म देश नै अन्धकारमा बस्नु परेको तितो यथार्थ पनि ताजै छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुनु त सपनाको कुरा मात्र थियो तै ...
पविधन खालिङ/अमेरिका । म मेरो छोरा छोरी र जीवन सङ्गीको साथ साउथ डाकोटा राज्यको सु-फल्स शहरमा सन् २०१४ देखी बस्दै आईरहेको छु । अमेरिकन व्यस्त जीवनसैली, हामी पनि आ–आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त थियौं । सन् २०२० को सुरुतीर चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाईरस भेटियो भन्ने हल्ला सुन्नमा आयो । प्रायः हामी सबैलाई लाग्थ्यो त्यो भाईरस सामान्य हो, एक दुई दिनमा समाधान हुनेछ । तर केही दिनपछि चीनले कोरोना संक्रमित वुहान शहर...
टिप्पणीः कहाँ चुक्यो कार्यदल ?
शिवबहादुर बस्नेत ‘राजेन्द्र’ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल २०७७’को प्रतिवेदन बारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादले यस पार्टीका आम नेता कार्यकर्ता चिन्तित र निराश थिए । पार्टी फुटको संघारबाट बच्छ कि बच्दैन भनेर । यस्तो वैचारिक, सैद्धान्तिक विश्वासको संकट पैदा भएको अवस्थामा गठन गरिएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव निश्चय नै पास हुने अवस्था ह...
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको निरन्तरता होला ?
शिव फुयाल । नेपालका धेरै राजनैतिक नियुक्तिमा जनताले खासै चासो राखेको देखिएको थिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि यो भन्दा अगाडीको नियुक्तिमा कसैको चासो थिएन । दैनिक १८ घण्टा बत्ति हुदैन थियो । लोडसेडिङको तालिका लिनको लागि आम नागरिक हारालुछ गर्थे । कुन बेला बत्ती आउने हो । पत्तै पाईदैन थियो । मुकेश काफ्ले हटेपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प...
जलवायु परिवर्तन, ट्रम्पको अहमता र पृथ्वीमा आईपर्ने संकट !
निनाम कुलुङ ‘मंगले’ । हुन त सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिदेखि विवभरि पैmलिएको ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ (कोभिड-१९) का कारण जलवायु परिर्वतनमा केही फेर-बदलाव आएको भन्ने भनाइ छ । अर्थात २०१९ को डिसेम्बर अन्तिदेखि विवभरि पैmलिएको ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ (कोभिड-१९) का कारण लगभग ७ महिनाको अवधिमा विश्वभरि पैmलिएको कोरोनाभाइ।सको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश विकशित र औद्योगिक देशहरुमा लकडाउन लागू गरिएसँगै उद्योग-धन्द...